Football Khabar » रोनाल्डोले फुटबलबाट सन्यास लिएपछि फिल्म खेल्ने !
रोनाल्डोले फुटबलबाट सन्यास लिएपछि फिल्म खेल्ने !
इटालियन युभेन्टसका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफूले फुटबलबाट सन्यास लिएपछि अभिनयमा लाग्ने योजना रहेको बताएका छन् । हालै दुबईमा वर्ष २०१९ को सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड ग्रहण गरेर इटाली फर्किएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै रोनाल्डोले यस्तो चाहना व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले दुबईमा बताएकै कुरा इटालीका मिडियासँग पनि दोहोराएका हुन् । दुबईमा पनि अन्तर्वार्तामा सरिक हुँदै रोनाल्डोले फुटबल छाडेपछि आफू फिल्म अभिनयमा लाग्ने बताएका थिए ।
‘जब म फुटबलबाट सन्यास लिन्छु, पढाइलाई पुनः अघि बढाउने मेरो चाहना छ । म अध्ययन र नयाँ कुरा सिक्न फुटबलपछिको समय लगाउनेछु,’ रोनाल्डोले भनेका छन् । रोनाल्डोले आफ्नो फिल्म खेल्न चाहना रहेको पनि बताए । ‘फिटनेस रहँदासम्म फिल्म खेल्ने पनि मेरो चाहना छ,’ उनले थपे ।
रोनाल्डोले युभेन्टससँग सन् २०२२ सम्मका लागि सम्झौता गरेका छन् । सो सम्झौता सकिँदा उनी ३७ वर्षका हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति १५ पुष २०७६, मंगलवार १३:३५